Ekoatora: Fandalinan’ny Vahoaka Ny Vokatry ny Fitsapan-kevibahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2011 8:25 GMT
Ny Filankevi-Pirenena momba ny Fifidianana [es] (na CNE amin'ny fanafohezan-teny Espaniola) ao Ekatora dia namarana ny fanisàna ny vato tamin'ny fitsapan-kevibahoana natao ny 7 May 2011. Na izany aza, Omar Simon [es], filohan'ny CNE, dia niteny fa ry zareo dia hanomboka [es] handray ny feon'ny sarambaben'olona amin'ny Alatsinainy (23/05) ho avy izao ary ny vokatra ofisialy dia havoaka ny Zoma amin'ny herinandro ambony.
Tahaka izay efa nitateran'ny Global Voices azy tany aloha tany, ny vokatra ampahany dia nanome ny fandresena faha-enina ho an'i Filoha Rafael Correa hatramin'ny naha-lany azy ho filoha tamin'ny 2007. Ny fitsapan-kevibahoaka dia nanome ny Mouvement PAIS Alliance, ny fiaraha-mitantan'ny antoko ho an'i Correa, fifehezana misimisy kokoa ny fitsarana ary fahefana bebe kokoa hametraka fepetra amin'ny votoatim-baovao sy ny fizaka-mànan'ireo media.
Mpanao fifhetsiketsehana mpomba ny governemanta avy ao Guayaquil. Sary an'ilay mpampiasa Flickr "Presidencia de la República de Ecuador," ampiasaina eo ambany fiarovana CC BY-NC-SA 2.0 license.
The Wall Street Journal dia mitondra fanehoan-kevitra mikasika ireo vokatra tany Amerika Atsimo:
Taorian'ny nahazoana 100% ireo vatom-pifidianana avy amin'ilay fifidianana tamin'ny 7 May, ny “eny” dia nahazo teo anelanelan'ny 44.96% sy 50.46%, raha toa kosa ny “tsia” nahavory 39.25% hatramin'ny 42.56% tamin'ireo fanontaniana sivy momba ny raharaham-pirenena.
Ireo fanapahan-kevitra tapaka amin'io fitsapan-kevibahoaka io dia manan-kery manerana ny firenena manontolo. Ny maningana dia ilay fanontaniana mitodika amin'ny fandraràna ny tolon'omby sy ny fahafahana mitompo ny ain'izy ireny. Voafaritry ny lalàna ny fampiharana azy. Ao anatin'io fanontaniana io, ny “Eny” dia nahazo 127 amin'ireo kantao 221 eo amin'ny firenena, isan'izany i Quito.
Pablo Lucio Paredes, mpanao gazety mpandalina tantara, izay manoratra ho an'ny El Universo [es], dia manazava ny hoe nahoana ny olona no mifidy ny “Eny” sy nahoana no ny “Tsia”. Lazainy fa nifidy ny “eny” ny olona satria Correa dia :
niezaka nikatsaka sy nisarika ny fironan-tsain'ireo vondrona natao an-jorom-bala. [Izy dia] nampiasa ny fomba rehetra tamin'ny sehatra fanabeazana, fahasalamana ary làlana [… Ao Ekoatora] ny teny faneva iray toy ny hoe “… efa ho an'ny tsirairay sahady” dia manana ny tena heviny marina izay manampy hanangana fifamatorana ara-tsosialy sy fahatsapan-tena ho anaty rafitra.
Noho ny hakelezan'ny fanohanana azon'ny filoha Correa tamin'ity fitsapan-kevibahoaka ity, mety hisy fandàvana ny voka-pifidianana ataon'ireo mpifanandrina ara-politika ary mety tsy hahazo fankatoavana araka ny lalàna ao anatin'ny volana maro. Toy izay koa, ireo vokatra ireo dia nitondra ny mpitoraka bilaogy sy ny vahoaka ao Ekoatora hifanakalo resaka momba izay tena nandresy marina tamin'ity fitsapan-kevibahoaka ity.
Dimitri Cevallos ao amin'ny LibreRed.net ohatra dia manome soso-kevitra fa tokony hampangiana kely ny kiakam-pandresena ataony ny governemanta, manao sarinteny amin'ny vivavinan'ny governemanta fa hoe nahazo fandresena 5 noho 1 ry zareo. Mpamaky iray antsoina hoe “Juanita” no nanamarika amin'ity lahatsratra fanohanana an'i Correa ity hoe:
Ing. Cevallos, heveriko fa nobaikoin'ny fankahalàna ny Filoha Rafael Correa ny fandalinanao. Ny Ekoatoriana rehetra mahafantatra fa ny Filohantsika dia niady irery nanoloana ny elatra havanana: Lucio Gutierrez, Nebot, Carlos Vera, Montufar, Rupture of the 25 (vatsian'ny USAID) Hurtado, Noboa, ny Eglizy Katolika ny media sy ny fanentanany lafo vidy, ny mpitolona omby, ny tompona casino […] ho fanampin'ny Pachacutik (ireo mpiova palitao izay omaly dia niaraka tamin'i Lucio, avy eo Correa, ary tsy izany intsony ankehitriny), saingy mba hanaovana izay haharatsiratsy kokoa ny toe-draharaha, niara-dia amin'ireo fatra-pibodo fahefana noho ny tombontsoan'ny tenany avy ao amin'ny Guayaquil, tahaka ny Junte Civique ao Guayaquil, ary tsy hotanisaina intsony i Alberto Acosta … Niady tamin'izany rehetra izany i Correa, ary androany dia mpandresy mazava ny Eny. Miàla any ny fanovàna, tsy mampaninona na iza na iza no ho tohina amin'izany.
Saingy tsy ny Ekoatoriana rehetra akory no mizara izay fientanentanan'i Juanita izay. Omar Vargas avy ao amin'ny bilaogy Cambiemos Ecuador [es] dia manoratra fa ilaina ny mijery lavitra any ambadik'ireo tarehimarika [es]. Manazava izy ny antony naharesy, na i Correa izany, na ilay lehiben'ny mpanohitra ao Guayaquil, ny Ben'ny tanàna Jaime Nebot, tamin'ny fitsapan-kevibahoaka:
Ny tena resy be tamin'ny fampielezan-kevitra dia i Correa sy Nebot, izay nametraka ny kajikajy politikany taminà fitsapan-kevitra tsy azo antoka loatra nitondra azy ireo any aminà zotra hafa mihitsy. Etsy andaniny, ny Filohan'ny Repoblika, nametraka ny hetsika nataony taminà fankatoavana namafisin'ny fitsapan-kevitra, fa tsy tamin'ny resaka maha-ara-dalàna na ny etika politika. Nitondra azy tamin'ny fankalazana mialoha sy hanao tetikasa fohy ezaka amin'ny fametrahana ny vokatry ny fitsapan-kevibahoaka izany,… Etsy ankilany, Nebot [dia] mpitarika mpanohitra, dia nametraka koa ny hetsika ara-politikany sy ny kajikajiny izay nanome vahana kokoa ny tombontsoan'ny tenany manokana fa tsy ny an'ny daholobe. [Ny làlana nodiaviny] tamin'ity fitsapan-kevibahoaka ity dia niavaka tamin'ny fitavozavozany sy ny tsy fahampiany, efa voalaza rahateo tany amboalohany fa hoe izy dia saro-kenatra manao Tsia […] kabary feno tahotra sy fitandremana fotsiny no nataony.
Ny fanakianana sasany nataon'i Vargas dia naelin'i Luis Hidaldo avy amin'ny Desde mi Trinchera [es]. Heveriny fa ny tena voa mafy dia tsy ny governemanta fotsiny izay nanantena handresy betsaka, fa ny vahoaka Ekoatoriana mihitsy[es]:
Voazarazara ny mpifidy ary ny fiantraikany dia tsy afa-manoatra i Ekoatora amin'ireo olana marobe misakana ny fandrosoany, raha ireo mpifanolo-bodirindrina aminy kosa misitraka firoboroboana mahatsiriritra.
Araka ny filazan'ny CNE, taterin'ny El Comercio [es], “faritany 12 no nifidy ny hitsipaka ny hanavaozana ny governemanta tanatin'ny 9 tamin'ireo fanontaniana 10. Fironana tahaka izany koa no hita tamin'ireo Ekoatoriana tany Amerika Avaratra, izay nifidy 6 tamin'ireo fanontaniana 9 nasaina novalian-dry zareo “
Saingy ny faritany 12 hafa, isan'izany ireo Ekoatoriana any Eraopa sy Amerika Latina dia nanome ny “vatom-pitokisana” nangatahan'i Correa. Ny tahan'ny tsy fandraisana anjara, na izany aza, dia nahatratra 22,6%.
Tsy mbola nambàra ny vokatra ofisialy, saingy ny sasany amin'ireo mpikambana ao amin'ny antenimiera, toa an-dry Andres Paez, solontenan'ny Antoko Demokraty Ankavia, dia manomana fangataham-panazavana [es] ho an'ny filohan'ny CNE mikasika ireo ambara ho fitongilanana nandritra ny fitsapan-kevibahoaka sy ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny dingam-pifidianana.
Ny hafa, toa an-dry Rafael Mendez, dia miteny fa ny zavatra tokony hofoanana dia izay ambarany amin'ny hoe “demaokrasian'ny mpibodo fahefana” tsy misy resaka laharam-pahamehana. Ireo mpitarika sasany ao amin'ny faritanin'i Cotopaxi sy Zamora Chinchipe, izay nandresen'ny “Tsia”, dia nanao antso hanoherana ny safidim'pirenena navoakan'ny latsabato tany amin'ireny faritany ireny.
Fehiny, fampisaintsainana avy aminà mpitoraka bilaogy iray izay manoratra ambadiky ny solonanarana Endivio Roquefort I, tao amin'ny bilaoginy Balcon del Peregrino [es], sady manazava izy ny antony anohanany ny tsy handraisana ny vato tsy manankery sy fotsy [es] amin'ny fanisàna ofisialy no sady mandefa eritreritra momba ilay fifidianana:
Fandaniam-potoana fotsiny ny hiresaka ny hoe “iza marina no nandresy”. Ny mpandresy dia tahaka ny mahazatra ihany. ny Fitarihana olona, ny Fampielezan-kevitra, ny fanodinkodinana, ny kobaka am-bava, ny fampitambazana ary ny fanasàna atidoha. Ny nandresy mazava sy tsy iadian-kevitra dia tolo-kevitra iray voafintina ho toy ny fanafoanana ny vitsivitsy amin'ireo heverina ho “zo” araka ny lalampanorenana, ary fananganana andianà heloka vaovao tsy ahitàna akory tra-doza izay hampiasaina indray ho antony hisamborana ireo mpitarika ny mpanohitra sy hanaovan'ny polisy herisetra. Raha fintinina: tahaka izay efa nahazatra antsika tato anatin'ny dimy taona, ny mpandresy dia ny famoretam-panjakana, ny tsy fifandeferana, ny fihenjanan'ny tady sy ny fifankahalàna.